असाध्यै बोल्ड नेपालकी भेटेरिनरी डाक्टर टिकटकमा भाइरल, को हुन् उनी ? (भिडियो) – Cn Chautari
माघ ३, २०७८ सोमबार 169
प्रियंका ढकाल ।
अहिले पछिल्लो सर्वाधिक चर्चामा रहेको भिडियो प्लाटफर्म टिक टकमा एकदम नै भाइरल छिन् ।उनको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । आकर्षक जीउडाललाई कलात्मक र बोल्ड ढंगले प्रस्तुत गर्ने भएकाले उनका भिडियोहरु खुबै चर्चित छन् । उनले २५ घण्टामा ५२ वटा भिडियो पोष्ट गरेर रेकर्ड नै राखेकी छिन् ।
अत्याधिक भिडियो पोष्ट गर्दा टिकटकको अल्गोरिदमले राम्रो काम गर्ने भएकाले उनले सर्वाधिक भिडियो पोष्ट गर्ने गरेको बताउछिन् ।उनको अहिले 7.5 लाख फलोअर्स भइसकेको छ भने ६ मिलिउन लाईकस् भएको छ । उनी भेटेरिनरी डाक्टर हुन् । भेटेरिनरी डाक्टर बनेर पशुको सेवा गर्ने ।
देश्य बोकेकी उनले यति धेरै भिडियो कसरी बनाउन सक्छिन् भने सबै अचम्मित बनेका छन्।तर उनका भिडियोहरु गीतमा आकर्षक जीउडाल देखाएर लिप्सिङ् मिलाएका मात्र देखिन्छन् । खासै क्रिय टिभ नभएपनि उनी नेपालको चर्चित टिकटकर्सको सूचीमा छिन् । उनले निकै बोल्ड रूपमा प्रस्तुती दिन्छिन् । जुन निकै भाइरल बनिर हेको हुन्छ।
Prevसेयर गरौ।। सन् १९५० को सन्धि अनुसार भारतले नेपालको ६० हजार वर्ग किमी जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने !
Nextडेटका लागि गएकी यि युवतीले प्रेमी मन नपरेपछि साथीलाई फोन गरेर नक्कली को’भिड रिपोर्ट पठाउन भनिन्, त्यस पछि….
यो जोडीको अनौठो हर्कत, एकाएक टिकटकमा भाइरल बन्यो भिडियो (भिडियो सहित)
केपी ओलीको सपना पुराहुदै नेपालमा फागुन १ गतेदेखि रेल गुडाइने, यात्रुले चढ्न चाहिं नपाइने !
केटाबाट केटि बनेकी अ निता चौ धरीलाई आइ माईहरुले नै कस्तो छ देखाउन भन्ने गर्छन्(हेर्नुस् भिडियाे)